WARBIXINTA DHABTA AH EE :-dagaalada Magaalada Dhahar | maakhir.com
April 14, 2007 in Maakhir, Somalia | Tags: Dhahar, Maakhir, Puntland, Sanaag, Somaliland
Dhahar:- Wararkii ugu danbeeyey ee ka socday magaalada Dhahar ee Gobolka Sanaag ayaa wali ka socda magaalada Galbeedkeeda waxaana dagaalka la xaqiijiyey inuu yahay mid culus oo hubka noocayadiisa kala duwan la isu adeegsadey iyadoo aan waxba la isula kala harin.
Wararka oo aanu dib u hubsanay ayaa waxay yihiin in ciidamada Somaliland la isugu geeyey Galbeedka Magaalada, dagaalkuna waxa uu markii hore ka bilowday bariga iyo galbeedka magaalada.
Ciidanka Somaliland ayaa dhinaca Bariga magaalada looga itaal roonaadey waxaana markii danbe dib loogu soo riixey Galbeedka Magaalada.
Warka dhabta ah ayaa waxa weeye in Dhinaca Somaliland ilaa iyo hada inta la ogyahay dhaawacoodu yihiin 3 askari oo dhaawac lagu qabtey, inta ka dhimatey aan la garaneyn.
Wararka sheegaya in 7 gaari laga gubey ama laga qabtey ayaa noqdey kuwo aan wax ka jirin oo aan la garaneyn khasaaraha dhabta ah ee ka jira dhinaca Somaliland hase ahaatee waxaa jira in baabuur wax laga gaarsiiyey.
Dhinaca Puntland ayaa waxaa noo suura gashey inaanu hubsano sidaa awgeed wax dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hada ma jiraan, waxayse saraakiisha ciidanka si hoose noogu sheegeen iney jirto in hal gaari wax laga yeelay.
DAGAALKU SIDA UU KU BILOWDAY.
Dagaalka ayaa waxa uu markii hore ka bilowday dhinaca Galbeed ee Magaalada iyadoo ay dhinacaasi kasoo weerareen ciidamda Daraawiishta oo isugu jira kuwa deegaanka iyo kawa ka yimi Magaalada Gaalkacayo.
Markii ay dhinacaas ka bilaabatey ayaa waxaa isla markiiba ay dhinaca Bari ay iyaduna rasaas xoogan ka bilaabatey, waxayna markii danbe laga adkaadey ciidankii joogey dhinaca Bari ee Magaalada oo lasoo baacsadey.
Kadib waxaa dhacday in magaalada Masuuliyiintii Somaliland ee joogey ay ka bexeen oo isaga carareen, lamana garanayo goobta ay hada ku sugan yihiin.
Goor aanu la xiriirney Magaalada Xingalool ayaa waxaa naloo sheegey in baabuur badan oo carar ahi ay dhaafeen magaalada, inkastoo warkaas aan la xaqiijin karin.
Ciidamada Somaliland oo kasoo duuley deegaano aad uga fog ayaa cabsi weyn ka qaba in jidku ka xirmo iyadoo al arkayey dibu ugurasho joogto ah, mana jiraan wax madax banaan oo noo xaqiijin kara warkaas.
Waxaa hubaal ah in dadka deegaanku aysan raali ka ahayn in magaalada Dhahar dagaal noocan oo kale uu ka dhoco.
Hada waxaa wararkuu ugu danbeeyey ee dhabta ah waxay noo sheegeen in dagaalkii uu yara qaboobey, habeena ay noqotey, waxayna warar aanu ka helnay dhinaca Puntland ay noo sheegeen in ay dagaalka sii wadayaan ilaa inta laga gaarayo Magaalada Ceerigaabo ee Xarunta Gobolka Sanaag.
« Secessionist ‘Somaliland’ Embarks on a Dangerous Course of Desperation
Puntland oo guulo kasoo hoyisay dagaal galabta ka dhacay Dhahar. »